Japana · Janoary, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Japana · Janoary, 2008
Tantara mikasika ny Japana tamin'ny Janoary, 2008
Japàna : Zom-pifidianana hoan'ireo vahiny ?
Fifidianana 19 Janoary 2008
James no mitatitra ao amin'ny Japan Probe ny adihevitra mikasika ny fikasana hanome ny zom-pifidianana hoan'ireo vahiny any Japàna: An article published last week in the Yomiuri Shinbun reports that the Democratic Party of Japan is attempting to pass a law that would grant voting rights to foreigners […] But...
Japàna : Amin'ny endrika vaovao
Teknolojia 19 Janoary 2008
I Edo no manapariaka sary HDR/GGD vitsivitsy mampiseho an'i Japàna izay nangoniny. [FANAMPIM-PANAZAVANA : ny HDR na GGD (High Dynamic Range photography | Imagerie à Grande Gamme Dynamique) dia fitambarana teknika ampiharina amin'ny sary amin'ny alalan'ny solosaina izay ahafahana manome sanda bebe kokoa ireo “pixel” tsirairay. Endrika vaovao no vokatr'izany sary izany. Tsahivina fa...
Fifindràmonina 17 Janoary 2008
Japàna : Ireo “ampakarina” eran'izao tontolo izao
Saripika 17 Janoary 2008
I Edo no manapariaka ao amin'ny blaogy Pink Tentacle sary vitsy izay mitatitra ny fomba fijerin'ny mpakasary Japoney Kimiko Yoshida manokana ireo “ampankarina” eran'izao tontolo izao. Misy rohy mankany amin'ny vohikalan'i Kimiko Yoshida, mpanakanto “makasaritena”, izay ahitana sary 150 mahery.
Japana : tsy hividy fiara vaovao aho
Tanora 15 Janoary 2008
Ny siosion-dresaka an-dalambe no milaza fa mitotongana ny toe-karena Japoney, ary ny fihisatry ny varotra fiarakodia no antony lehibe miteraka izany. Iza no omentsiny ? Ny ankizy, hoy ny sasany, izay tsy mazoto hividy zavatra azo tsapaintanana. Nanoratra ny momba ny fihenan’ny fividianana fiara ity ny mpamaham-bolongana tamin’ity herinandro ity,...
Japàna : Fikendrena ireo Tanora
Tanora 14 Janoary 2008
I David Marx dia nanoratra lahatsoratra mahaliana mikasika ny Kolotsain'ny Tanora Japoney ao amin'ny Neojaponisme : The cover story in the February issue of Takarajima is titled “Youth are Becoming Idiots.” The small print above the title states, You see, our idiot Japanese children — spoiled by the less rigid...
Japana: ny ampitan’ny hadivory na hiserasera sa tsia?
Hevitra 07 Janoary 2008
Anivon’ny famahoahan’ny serasera, mety hiteny ny olona iray fa mizara roa izao tontolo izao: Izay manam-pifandraisana sy izay tsy manam-pifandraisana amin’ny aterineto. Raha mandray anjara sy mifanabe anaty kolontsaina (“iraisana”) mivoatra mampiavaka azy manokana ny vitsy an’isa mpiserasera nefa tsy mitsaha-mitombo dia tsy (manana kolontsaina iraisana) kosa ny maro an’isa...
Japana: Ny Bolongana 50 malaza indrindra
Teknolojia 05 Janoary 2008
Serkan ao amin'ny Tokyotronic no nandrakitra an-tsoratra (ho amin'ny teny anglisy) ny lisitry ny bolongana 50 malaza indrindra any Japana (raha itokisana ny Technorati Japoney) . Araka ny nanaovany azy dia ny isan'ny rohy mankany amin'ny bolongana no masontsivana nifidianana azy ireo. Ohatra: Ny Gigazine (ny malaza indrindra) dia misy bolongana hafa...